အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ပထမဆုံးသမ္မတနှင့် န၀မမြောက်တမဒ တို့၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်နှင့်ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးများ
ပထမဆုံးသမ္မတနှင့် န၀မမြောက်တမဒ တို့၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်နှင့်ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးများ
အဂ္ဂမဟာသရေစည်သူ သီရိသုဓမ္မရာဇာ စ၀်ရွှေသိုက်
မွေးရက် ၁၈၉၆ ခုနစ်၊ အောက်တိုဘာ (၁၆) ရက်
မိဘများ အဖ စပ်ချုံ+ အမိ ဒေါ်န်းဆာ
ကြင်ဖော် မဟာဒေ၀ီ စင်ဟိန်ခမ်း
သားသမီး သားတော် သမီးတော် ရှစ်ယောက်
ကွယ်လွန်ရက် ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ (၂၁) ရက်
၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် လွတ်လပ်ရေး ရသောအခါ ယာယီအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး
ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားထဲမှ ပထမဆုံးသော မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတကြီး အဖြစ် တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသည်။
၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် သမ္မတ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသော အခါ လူမျိုးစု
လွှတ်တော် နာယကကြီး အဖြစ် ရွေးချယ် တင်မြှေက်ခြင်း ခံရပြန်သည်။
၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ် အထိ လူမျိုးစု လွှတ်တော် နာယကကြီး အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အမျိုးဘာသာ သာသနာ ပညာတွင် ကြိုးစား အားထုတ်မှုကြောင့် နိုင်ငံတော် အစိုးရက စဝ်ရွှေသိုက်အား ‘အဂ္ဂမဟာ သရေစည်သူဘွဲ့’ အပြင် ‘အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မဘွဲ့’ ကိုပါ ချီးမြှင့်တော်မှုသည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် တော်လှန်ရေး ကောင်စီ အမည်ခံ ဗိုလ်နေဝင်း ဦးဆောင်သည့် စစ်တပ်က နိုင်ငံတော် အာဏာအရပ်ရပ်ကို သိမ်းပိုက်စဉ် မိမိ နေအိမ်ဝင်း အတွင်းတွင်ပင် သားငယ် စဝ်မီမီသိုက် ပစ်သတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံတော် သမ်မတကြီးဟောင်း စဝ်ရွေသိုက်လည်း ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
အဂ္ဂဗလာသရေကျ အလောင်းစည်သူ သီရိသုဘရာဇာ မာမီတိမ်းဆိမ်
မွေးရက် ၁၉၄၅-ခု၊ ဧပြီလ(၂ဝ)ရက်
မိဘများ ဦးမောင်ဖြိုး + ဒေါ်ခင်ညွှန့်
မွေးရာဇာတိ ဧရာဝတီတိုင်း ငပုတောမြို့နယ်ကြူကုန်းကျေးရွာ
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ သူရဲကောင်းလက်မှတ်ကို ရရှိခဲ့သည်။
၂ဝဝ၉-ခုနှစ်၊ မတ်လအတွင်း သွားရောက်ခဲ့သော စင်ကာပူနိုင်ငံ ခရီးစဉ်တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံမှ သစ်ခွတစ်မျိုးကို ဒမ်ဒရိုဗီယမ်(မြန်မာလို=မာမီ)သိန်းစိန်ဟု အမည်ပေး ဂုဏ်ပြုခြင်း ခံရသည်။
၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၄)ရက်တွင် အဂ္ဂဗလာသရေကျ၊ အလောင်းစည်သူ သီရိသုဘရာဇာ ဘွဲ့ရရှိသည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:20 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မြန်မာ အလုပ်သမ တစ်ဦး ကြံစည် ခံရခြင်းမှ ကံကောင်းစွာ လွတ်မြောက်
ဘန်ကောက်မြို့ တလိန်ခြမ်း၊ ကျောက်ဖုယား ရပ်ကွက် လမ်းသွယ် ၄ ရှိ ဘလက်ဖလားဝါး အထည်ချုပ် စက်ရုံ တွင် အလုပ် လုပ်ကိုင် နေကြ သည့် မြန်မာ အလုပ် သမားက ...
အင်တာနက်မယ်..အဖေါ်အချွတ်မယ်..ဘာဘာညာညာမယ်…အလန်းဇယားမယ်..များ သတိပြုရန် ပေးစာ
ယနေ့ လူငယ်အများစု အင်တာနက် သုံးကြ၏..။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း လောက်ကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်တာနက်များအသုံးပြုလာကြပါတယ်. .။အရင်...
Tint Lwin shared စင်္ကာပူ ဖီး's photo. အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) တပ်ဆင်ထားမထား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ အ၀တ်အထည်စတိုးဆိ...
ABSDF အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်း စစ်ထောက်လှမ်းရေးက အဖေခေါ်ရလောက်အောင် ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်မှုတွေကို ရေးသားဖော်ထုတ်ထားတဲ့ စာအုပ် ၂အုပ်ပါ။ အဲဒီလူသတ...
တပ်မတော်သည် အမျိုးသားရေးကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက်
ငရဲ သား တပ်မတော်သည် အမျိုးသားရေးကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက် ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် အကြီးကြီးတွေ ထောင်ထားတဲ့ခေတ်တုန်းက ....။ (၁) ဘင်္ဂလီတွေကို တောင...